गरे के सकिन्न ?, कर्णालीका डिआइजीले बनाए कारागारलाई गुरुकुल ! - PUBLICAAWAJ
गरे के सकिन्न ?, कर्णालीका डिआइजीले बनाए कारागारलाई गुरुकुल !
प्रकाशित : आइतबार, चैत २४, २०७५११:३६ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
काठमाडौँ, आज कर्णाली प्रदेशका सबै कारागारमा पुस्तकालय छन् । सफा-व्यवस्थित कोठा, आधुनिक दराज अनि दराज भित्र ख्यातिप्राप्त लेखकका जीवनोपयोगी, प्रेरणादायी, साहित्यिक, सिकाइमूलक, केही जीवनी र केही आत्मवृत्तान्त पुस्तकको संग्रह ।
यी यत्तिकै सम्भव भएको होइन । जुम्ला कारागार निरीक्षणमा गएका डिआइजी महेशविक्रम शाहको प्रयासले आज यो सफल भएको छ । उनको यस प्रयासको पछाडी एक कहानी छ ।
डिआइजी शाह जुम्ला कारागार निरिक्षणमा गएका थिए । त्यसै बेलामा उक्त कारागारका एक कैदीले उनलाई भने, ‘ सर, मलाई किताब पढ्ने मन छ, तर यहाँ पाइन्न। केही व्यवस्था हुन सक्दैन? ‘
एक कैदीको यस्तो प्रश्नले उनलाई झल्यास्स बनायो । अनि तम्सिए उनि आफ्नो क्षेत्रका प्रत्येक कारागारमा पुस्तकालय स्थापना गर्न । अनि शुरु भयो ‘ कारागारलाई किताब ‘ अभियान ।
सोही अभियान अन्तर्गत शनिबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीद्वारा सुर्खेत कारागारको पुस्तकालयको उद्घाटन गरियो । सुर्ख्र्ट सहित कर्णाली प्रदेशका रुकुम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र डोल्पा जिल्लामा यस्ता पुस्तकालय स्थापना गरिएका छन् ।
डिआइजी शाह भन्छन्, ‘ अब किताब कैदीहरूले पढ्न पाउनुहुनेछ, कारागार अब साँचो अर्थमा सुधारगृह बन्नेछ । यसले कारागारभित्र समय बिताउन मात्र हुने छैन, कैदीहरूलाई समाजमा फर्किसकेपछि सकारात्मक कार्य गर्न पनि प्रेरणा मिल्नेछ ।
डिआइजी शाह आफू पनि लेखन क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तित्व हुन् । उनले ‘ छापामारको छोरो ‘ नामक कथा संग्रहबाट २०६३ मा मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए ।
उनले भने, ‘ म ती जुम्लाको कारागारमा रहेका कैदीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, उनको इच्छाका कारण नै अब कर्णाली प्रदेशको सबै कारागारमा रहने कैदीले पुस्तक पढ्न पाउनुहुनेछ । ‘
यति मात्र नभएर पुस्तकालय स्थापना भएका कारागारमा ‘ बुक क्लब ‘ गठन गरिएको छ । क्लबको तर्फबाट प्रत्येक शनिबार अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ ।
उक्त कार्यक्रममा कैदीहरु बीच आ–आफूले पढेका पुस्तकको समीक्षा हुनेछ र साथै धेरै किताब पढ्ने कैदीलाई पुरस्कारस्वरूप किताब नै दिइनेछ ।
पुस्तकालय स्थापना पश्चात मुख्यमन्त्री शाहीले कारागारलाई ‘ गुरुकुल ‘ भनेका छन् । ।
सडक दु’र्घटनामा एकको मृ’त्यु, एक घा’इते
बेपत्ता दुई बालिकामध्ये ८ वर्षकी अनुश्का परियारको शव फेला !